Bathi ilokhu abakudingayo eNhlokodolobha - Bayede News
Bekuyinjabulo yodwa ezitaladini zaseMsunduzi kuguduza abagijimi. Obekwenzeka bekubonisa ukuthi lokhu okwakushiwo ngabagqugquzeli ukuthi inhloso yalo mjaho ukuqhakambisa iNhlokodolobha. IKZN Capital City Marathon ikumisile ukusebenza ngokwejwayelekile eMsunduzi ngenkathi lo mjaho uqhubeka mhla zingama-23 kuNhlolanja. Uqale ngehora lesi-5 kusempondozamnenke. Lokho akubavimbanga abalandeli nabasubathi kanye nabathandi bomdlalo wokusubatha ukuthi bazoxhasa abagijimi ngokomoya. Noma izulu beliguqubele lo mjaho uqale kuseluvindi, futhi lokho akubavimbanga abathandi balo mdlalo. Phakathi kwezibukeli bekukhona uCynthia Reeve obezokweseka uMyeni wakhe uRobin Reeve (69) othe umyeni wakhe sekuneminyaka engama-31 aqala ukugijima.
Lo mjaho oqalayo ophenduke uchungechunge, kanti ungeminye yemijaho ephakela iComrades Marathon kanye ne-2 Oceans Marathon. Ekhuluma noMsunduzi News, uReeve uthe: “Umyeni wami (Robin) uzosebenzisa lo mjaho ukungenelela iComrades Marathon okwama-20 kulo nyaka. Lokhu ikona esikudingayo ePietermaritzburg njengeNhlokodolobha njengoba nami ngisuka eHillcrest ngazoba yingxenye yalabo abazobungaza iNhlokodolobha yethu”. Amakhosazane abemi emathathu uNokubonga Ngcobo, uZamambo Mkhize kanye nomakoti osemncane oliwele likaZamambo uNkk Codele bathe nabo bangabagijimi kodwa abawungenelanga umjaho. Abakuzele eMgungundlovu ukuzokweseka abangani babo abadabuka nabo enhla nesifundazwe iKwaZulu- Natal eNewcastle. “Okusilethe lana sifuna ukuzonika umfutho umyeni kaCodele uMlungisi ngoba uthanda ukugijima kuComrades Marathon,” kusho iwele likaCodele uZamambo. Ubesho lokhu nje uCodele ugcwele umgwaqo weseka uMlungisi edlula ngendlela.
Kube ngukudlula la ebebemlinde khona babe sebeshintsha inxiwa belibhekise kwenye indawo la bezofike bamuphe khona umfutho. Umjaho ubuhlukaniswe izigaba ezintathu owama-10km, owama-21.1km kanye nowama-42.2km. Umsubathi ohlonishwa iNingizimu Afrika yonke uBongumusa Mthembu obegijima umjaho wama-42.2 km usheshe wavula igebe wacacisa ukuthi akazile ukuzodlala la. Exoxa nentatheli yaleli phephandaba uthe; “Lo mjaho awulula ngoba unamajika amaningi. Uma ungumsubathi lokho kuyagqilaza ngoba ufisa engathi ungabona ukuthi uzohlangabezana nani.
Ukuphonsela inselelo yokuthi ukwazile yini ukuqeqesheka ngendlela efanele ngoba uthi sewuzojika uzibuze ukuthi engabe ngizobonanike manje.” UMengameli we-Athletics South Africa uMnu u-Alec Sikhosana, naye onomlando kwezokusubatha njengoba wayengumpetha webanga lama-800m, uthe lo mjaho iwona kanye abagijimi abebewudinga. “Kuyasho ukuthi lo mjaho uhlelwe ngabantu abaqondayo ukuthi yini edingwa abagijimi oMnu uSteve Mkasi.” Uthe usho ngoba awukho umjaho odida umsubathi njengalona eNingizimu Afrika. “Ngisho lokho ngoba akazi ukuthi uma ejika uzojikelaphi, ngaphandle komuntu ohlala eMsunduzi ngoba indawo yangakubo ayaziyo, kodwa umsubathi ongazinzile lapha (eMsunduzi) akazi ukuthi alindele ini, lokhu okuhle khona sizomubona uma egagamelile. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi ngonyaka ozayo inani labagijimi lizophindwa kathathu kunalokhu ebeliyikho,” kulanda uSikhosana.
Ubuholi bube yingxenye yalo mjaho kusuka uqala uze uyophela, uSekela Meya uMahnilal Inderjit okunguye oqalise umjaho wama-10km ngehora lesi-7 uthe lolu chungechunge lo mjaho luzokhombisa abakwazi ukukwenza beyiNhlokodolobha nokuthi kungani beyiNhlokodolobha. Uphelele enkundleni yabasubathi i-Athletics Track okuyinkundla esezingeni lomhlaba eyavulwa ngonyaka owedlule nguMengameli uCyril Ramaphosa. USekela Meya uManhilal uthe; “Lokhu okwenzeka la kuyasibonisa ukuthi lokhu esilondoleze kukona njengeNhlokodolobha manje sekuba nomuvuzo.
Kumnandi ukubona le nkundla isetshenziselwa okuyikona kona.” Ubesho lokhu ebuka indlela inkundla ebigcwele ngakhona abasubathi kanye nezihlwele. Uqhube ngokuthi okumhlaba umxhwele ngukubona abantu abadala bengenela umjaho lokhu kunguphawu lokuthi ukunakekela impilo ayikho imali engalinganiswa nayo. IMeya uMzimkhulu Thebolla ithe ukugijima kuyisitayela, yingakho nabo bezibandakanya nakho. Iqhube ngokuthi bayazigqugquzela izakhamuzi ukuthi zibe yingxenye yalolu hlobo lwemidlalo ngoba idolobha elinabantu abaphilile idolobha elinabantu abakhiqizayo. “Okungihlaba umxhwele ngalo mjaho ukuthi awukho omunye umjaho iNingizimu Afrika yonke okungumjaho oqhakambisa idolobha kunalokho sikubona kwamanye amazwe aphesheya, lokho kukodwa kuthatha idolobha lethu kulibeka ebalazweni,” kulanda iMeya. Isonge ngokuthi ifisa ukubona lo mjaho ungalehlisi igiya abahamba ngalo kunalokho lenyuke.